Madaxweyne Sharif oo weli sii wada magacaabista degmooyin cusub iyo Golaha Wasiiradu diidmo ka muujiyey arrinkaas – idalenews.com
Madaxweynaha Somalia Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta mar kale tuulooyin ka tirsanaa gobolada Gedo iyo Bakool u magacaabay degmooyin cusub oo ka mid noqonaya degmooyinka goboladaas horey uga jiray.
Agaasimaha guud ee wasaarada arimaha gudaha ee xukuumada Somalia Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe) ayaa saxaafada u aqriyey wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Somalia taasoo lagu magacaabay degmooyin cusub oo kala ah Dhuurey iyo Karaaban oo kala tirsan gobolada Gedo iyo Bakool.
Madaxweyne Shariif ayaa malamihii ugu dambeeyey soo saarayey wareegtooyin is daba jog ah oo degmooyin cusub loogu magacaabayey qaar ka mid ah gobolada dalka sida Sh/dhexe, Bay iyo Bakool, lamana oga oga waxaa ku soo beegay xiligan magacaabida degmooyinka, inkastoo xeel dheerayaasha siyaasada Somalia ay ku tilmaameen arin qeyb ka ah ololaha doorasho ee madaxweynuhu uu ugu jiro mar kale in xilkaas loo doorto.
Khamiistii aynu soo dhaafnay ayaa kulan golaha wasiiradu ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay si cad uga soo horjeesteen arintan, waxayna isku raaceen in magacaabista degmooyinka cusub ee aan Golaha la horkeenin aysan waafaqsanayn nidaamka dowliga ah, sidaas darteedna laga soo bilaabo 01-da July 2011 illaa 31-ka August 2012-da wixii dagmo ah ee la magacaabay ay yihiin sharci darro.
Golaha wasiiradu waxay intaa raaciyeen in magaacabista dagmooyinka cusub ay wax u dhimi karto dib-u-heshiisinta iyo dowladd wanaaga wuxuuna Goluhu soo jeediyey in la xakameeyo soo saarida go’aamada lagu soo beegayo xilliga doorashooyinka.